Dreams Khabar उदास भए क्रिकेटर सन्दिप, आखिर किन ?
उदास भए क्रिकेटर सन्दिप, आखिर किन ?
जेष्ठ २४, ड्रिम्स -
क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने अब क्रिकेटर मात्र नभई गायक पनि बनेका छन् । पछील्लो समय विश्वभर चर्चामा रहेका नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दिप लामिछानेको अफिसियल गीत सार्वजनिक भएको छ । क्रिकेटको माध्यमबाट सफलताको शिखर तर्फ लम्किरहेका सन्दिपको उदास बोलको गीतको लिरिकल भिडियो युट्युबमा सार्वजनिक भएको हो ।
सन्दिपले केही समय अघी मात्र आफ्नै अफिसियल च्यानल सन्दिप लामिछाने मा गीतको ट्रेलर राखेका थिए । त्यही बेला देखी नै बहुप्रतिक्षित बनेको गीत सार्वजनिक भएको हो । गीतमा सन्दिपको आवाज रहेको छ भने सन्दिप कै कम्पोज रहेको छ । बिनोद तिमल्सिनाको शब्द रहेको गीतमा सनिश सुनुवारको संगीत रहेको छ । सार्वजनिक गीतमा प्रेममा धोका भएको भाव रहेको छ । गीत संगीतमा पारखी सन्दिपले गीत संगीत सधैं आफ्नो प्रेणणाको स्रोत भएको आफ्नो अफिसियल फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ।
हालै मात्र इन्डियन प्रिमियर लिग आईपिएल र विश्व ११ बाट वेष्टइन्डिज बिरुद्ध टि २० खेलेर फर्कियका सन्दिप क्यारेबियन लिग (सिपिएल) र क्यानडाको ग्लोबल टी–ट्वान्टी क्रिकेट लिगमा समेत अनुबन्धन भईसकेका छन् । सन्दिप बिभिन्न समयमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा सेमेत गीत गाउदै आईरहेका छन् ।